Mpanamboatra sy mpamatsy PETG - China PETG Factory
0,5 oz (15ml) tavoahangy mitete boribory boribory PETG miaraka amina hatoka 9-400
Ny tavoara mitete 0.5oz / 15ml dia vita amin'ny fitaovana PETG. Boribory lavalava sy fisaka ny tavoahangy mitete. Ny tavoahangy plastika manosika plastika dia manondro fa azo atao ny manara-maso na mitsabo azy amin'ny dity. Ny fango namboarin'ny orinasanao dia azo atao amin'ny tavoahangy fampidinana lafo vidy, mba hanatsarana ny vokatry ny orinasan'ny orinasanao. Ny endrika ankapobeny amin'ny tavoahangy fitetezana banga dia feno volo, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy vokatra azo aseho amin'ny talantalana. mandany ny fonosana mifatotra sy ny famehezana tombo-kase mba hahazoana antoka ny famehezana 100% ny vokatra. Azo ampiasaina amin'ny fonosana eyedrops, fonosana menaka ilaina, tavoahangy sigara elektronika. Ahitana ny satrony tavoahangy mitete.
0,5 Oz (15ml) tavoahangy fitetezana PETG oktagonaly mandoaka 10 vozony
Ny tavoara mitete 0,5oz / 15ml dia vita avy amin'ny fitaovana PETG. Ny tavoahangy plastika ho an'ny latsaka amin'ny maso dia octagonal sy fisaka. Ny tavoahangy fitetezana dia manondro fa azo zahana na tsaboina amin'ny dity. Ny fango namboarin'ny orinasanao dia azo atao amin'ny tavoahangy plastika mitete hanatsarana ny vokatry ny orinasanao. Ny endriny ankapobeny amin'ny tavoahangy plastika dia mifatotra, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy vokatra aseho amin'ny talantalana. ary ny tombo-kase mba hiantohana ny vokatra dia famehezana 100%. Azo ampiasaina amin'ny fonosana eyedrops, fonosana menaka ilaina, tavoahangy sigara elektronika.